» मकवानपुरका गणेश थिङलाई आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा १० वर्ष कैद
मकवानपुरका गणेश थिङलाई आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा १० वर्ष कैद
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०९:३१
मकवानपुर, २४ बैशाख । आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गर्न सक्ने सोच मानिसमा कसरी हाबि हुनसक्छ ? सुन्दा मात्रै पनि पिडा दिने यस्तै घटनाका कारण मकवानपुरका ५२ वर्षीय गणेश थिङलाई १० वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । ‘हेटौँडा सन्देश’ दैनिकमा आज प्रकाशित समाचार अनुसार मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ५ बस्ने थिङलाई उनकै श्रीमती ४७ वर्षीय साहिलीमाया बल थिङको हत्याको अभियोगमा १० वर्ष कैद फैसला गरिएको हो ।
वि.सं. २०७५ साल असार २८ गते राति गणेश उनकै छिमेकीको घरमा भोज खाना गएका थिए । उनकी श्रीमती साहिलीमाया भने घरमा नै सुतिरहेकी थिईन् । भोज खाएर आएका थिङले घरमा सुतिरहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई ओछ्यानमै काठको गजबारले हिर्काए । त्यस समयमा गजबारले हिर्काएरै गणेशले हत्या गरेको अदालतले ठहर गरेको हो । श्रीमतीको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरले उनलाई कैद फैसला गरेको हो । जिल्ला न्यायाधिश खडानन्द तिवारीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ जोरपाटीकी स्थायी निवासी रोज लामा २० वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । क्यालोफोर्नियामा बस्ने नेपालीहरुमाझ भएको मिस नेपाल क्यालेफोर्निया २०१७ की बिजेता समेत बनिसकेकी रोज लामाले ट्यालेन्ट राउण्डमा पेन्टिङ बनाएकी थिईन् । उक्त पेन्टिङ देखि नै उनलाई मिस नेपालको दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।